Farmaajo oo la kulmay Ciidamada ku jira Xerada Jeneraal Gordan
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa Wasaaradda Gaashaandhigga loogu geeyay Ciidamada ku jira Saldhigga Jeneraal Gordan, si uu u xaliyo xiisadda u dhaxaysay Ciidamada Imaaraadka uu tababaray iyo kuwa Militeriga.
Madaxweynaha ayaa la kulmay Askar iyo Saraakiil ku sugan Saldhiga, isagoo kala hadlay arrimo uu kamid yahay dagaalkii Ciidamada dhex-maray kaasi oo salka ku hayay boob iyo dhac loo geestay agabkii military ee Imaaraadka uga tagey Xerada.
Farmaajo ayaa ugu baaqay Askarta inay iska iloobaan dhacdaas, islamarkaana hor looga sii socdo maadaama aysan ahayn wax ku cusub Ciidamada Xoogga dalka.
Kulankan ayaa yimid xilli Xiisad ay ka taagnayd Xerada Tababarka Ciidanka Jeneraal Gordan wixii ka dambeeyay markii Imaaraadka uu tababariyaashii kala baxay saldhigga, oo mudo sanado ah tababar ku siinayay boqolaal Askari.
Ciidamada uu la kulmay Farmaajo oo gaarayay 270 Askar, oo 60 kamid ah yihiin Kumaandoos ayaa ka codsaday in jawaiga Saldhigga lagu soo celiyo sidii hore, islamarkaana ay kusoo laabtaan Askartii ku firxatay dagaalkii dhawaan dhacay.
Madaxweynaha ayaa cafis u fidiyay dhamaan Ciidamadii uu dagaalka dhexmaray, oo qaarkood xabsiga ku jira,qaarna baxsatay, isagoo u balan qaadey Askari walba in la siin doono mushaaarkiisa bil walba.
Wararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay Muqdisho
Soomaliya 23.04.2018. 22:14
Imaaraadka ayaa ku dhawaaqay maalmo kahor inuu soo afjaray dhamaan howlgalkii...
Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab iyo ilaaladiisa oo lagu dilay Bakool
Soomaliya 24.10.2018. 10:53
Imaaraadka oo hal shardi ku xiray soo celinta xiriirka Soomaaliya [DAAWO]
Caalamka 29.07.2018. 19:42
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo soo gaarey Muqdisho [DAAWO]
Soomaliya 16.03.2019. 11:27
Wasiirka difaaca UK oo booqasho qarsoodi ah ku yimid Muqdisho [Sawirro]
Soomaliya 01.08.2018. 13:09
Daacish oo sheegatay Qarax ka dhacay Muqdisho
Soomaliya 18.06.2018. 11:02
Shil Gaari oo ka dhacay Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 10.06.2018. 12:18
DF oo dayacday caruurta Jenaraalo ay qarax ku dishay Al-Shabaab
Soomaliya 06.02.2019. 09:41
Madaxweynaha Masar oo balanqaad u sameeyay Farmaajo oo ay kulmeen 23.04.2019. 17:13
ISIL oo sheegatay weeraradii dadka badan ay ku le'deen ee Sri Lanka 23.04.2019. 15:08
La-taliye sare oo ka warbixiyay safarkii Deni ee Imaaraadka iyo arrimo kale 23.04.2019. 14:20